११ सेक्सुअल वर्ल्ड रेकर्ड, पढेपछि दंग पर्नु हुन्छ (भिडियोसहित) - Nepali Virals
११ सेक्सुअल वर्ल्ड रेकर्ड, पढेपछि दंग पर्नु हुन्छ (भिडियोसहित)
३० फाल्गुन २०७२, आईतवार १०:०८	1,159 पटक-पढिएको
सबैभन्दा बढी जिज्ञासा र कौतुहलताको बिषय हो- सेक्स । यसका ’boutमा महिला होस् या पुरुष सबैको मनमा उत्सुकता हुन्छ । जति खायो त्यति गुलियो भने झैँ जति जान्यो त्यति नै जिज्ञासाको बिषय बन्ने गर्छ यो । तै पनि आज हामीले धेरैको जिज्ञासा मेट्ने मेट्ने कोसिस गर्दै छौ ।
बिश्वमा सबै भन्दा लामो यौनांग कसको होला ? सबै भन्दा ठूलो र बलियो कसको होला ? सबै भन्दा ठूलो स्तन कसको होला ? शारीरिक सम्पर्क सबै भन्दा बढी कसले गर्न सक्ला ? हस्तामैथुन सबै भन्दा बढी कसले गर्न सक्छ होला ? एक दिनमा एक महिलाले कति जनासंग सम्पर्क गर्न सक्ला ? आदि इत्यादि धेरैको जिज्ञासा बन्ने गरेको छ । यी जिज्ञासा मेटाउनका लागि पढ्नुस बिश्वमै रेकर्ड कायम भएका यी ११ रोचक तथ्यहरु जुन रोचक मात्रै होइन अचम्म पार्ने खालका छन् ।
१. २५० जोडीको सामुहिक सेक्स
सन २०१० मा जापानमा एउटा यस्तो रेकर्ड बन्यो जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ । जापानका २५० जोडीले यस्तो रेकर्ड बनाए कि, उनीहरुले एउटा वायर हाउसमा सामुहिक रुपमा शारीरिक सम्बन्ध राखे । यसको डिभिडी पनि बनाएर सार्वजनिक गरे ।
२. विश्वकी सबैभन्दा बुढी पोर्नस्टार
विश्वकी सबैभन्दा वृद्धा पोर्नस्टार ताइवानको ताइपेइकी हजुरआमा नामले चिनिने चिउ नामकी महिला हुन् । ८२ वर्षकी चिउले ४० वर्षदेखि लगातार यौनपेशा अँगाल्दै आएकी छिन् ।
३. सबै भन्दा लामो लिंग
तपाईलाई लाग्दो हो ‘बिश्वमा सबैभन्दा लामो लिंग कसको होला ?’ यदि यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो सामग्रीले तपाइको जिज्ञासा मेट्न सक्छ । जोन फेल्कान नाम गरेका यी व्यक्तिको लिंग साढे १३ इन्चको छ । जुन बिश्व रेकर्डमा कायम छ । सामान्य अबस्थामा पनि उनको लिंगको लम्बाई ८ इन्च छ ।
४. लामो स्तन
अमेरिकाका हकिंग्सको स्तनलाई सबैभन्दा लामो स्तनको रुपमा लिइन्छ । उनको स्तनको आकार १०९.२ सेमी छ । उनले लगाउने ब्रा समे उत्पादन हुदैन तर आफैले अर्डर दिएर बनाउने गरेकी छन् । उनको यो रेकर्ड सन २००० मा कायम भएको थियो ।
५. विश्वकै बलियो योनी
सेक्स सन्तुष्टि र सन्तान गरि २ काममा योनीको प्रयोग हुन्छ । यसको योनीको क्षमता कति होला ? कमैले सोच्छन् । रुसकी टेटियाटाले भने अर्कै उपाधि पाएकी छन् । जसको योनी संसारकै बलियो योनीको रुपमा विश्व रेकर्ड कायम छ । उनले आफ्नो योनीका मांसपेशीले १४ किलो वजन उठाएकी छिन् । मोटो धागोमा बाँधिएको १४ किलोको वजनलाई उनले धागोमार्फत अठ्याउन सकेकी हुन् ।
६. सबैभन्दा लामो समयसम्म हस्तमैथुन
७. विश्वकै ठूलो योनी
सबै भन्दा ठूलो योनी कसको होला भन्ने धेरैको जिज्ञासा हुने गर्छ । विश्वमा अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो योनीको किर्तिमान स्कटल्याण्डकी अन्ना स्वानको नाममा रहेको छ । सन् १८४६ मा जन्मेर १८८८ मा मृत्यु भएकी अन्नाको योनीको परिधी १९ इन्च अर्थात् ४८ सेन्टिमिटर थियो ।
८. विर्यस्खलन गरेर टाढासम्म फ्याक्ने व्यक्ति
९. एकै दिन ९०९ जनासंग सेक्स
मान्छेले एक दिनमा कति जना संग सेक्स गर्न सक्ला ? सय, दुइ सय वा ५ सय ? यदि तपाई यो भित्र हुनुहुन्छ भने गलत । लिजाले एक दिनमा ९०९ जना संग सेक्स गरेर रेकर्ड बनाएका छन् । उनले ९२० जनासंग सेक्स गरेर रेकर्ड बनाउने चाहना राखेकी छन् ।
१०. सबैभन्दा बढि बच्चा पाउने महिला
११. विश्वमा सबैभन्दा पाको उमेरमा बाउ
सबैभन्दा पाका बाबु भारतका नानुराम जोगी नामका व्यक्ति विश्वमा सबैभन्दा पाको उमेरमा बाउ बन्ने व्यक्ति हुन् । उनले ९० वर्षको उमेरमा छोरो पाएका थिए । उनले आफ्नी चौथो श्रीमतीबाट उक्त छोरो जन्माएकी हुन् । आफ्ना सबै श्रीमतीबाट कति सन्तान जन्मे भन्ने हेक्का समेत उनलाई छैन । सन्तान धेरै भएर गन्न नभ्याएको उनी बताउँछन् ।
अघिल्लो बिश्वका ५ अनौठो भवन
पछिल्लो यस्तो सपना देख्नु भयो भने बिपनामा धन प्राप्त हुन्छ (२० सपना)